အဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးသိန်းဦး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံတော်သို့ အလည်အပတ်ခရီး သွားရောက် | NLD
Home News အဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးသိန်းဦး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံတော်သို့ အလည်အပတ်ခရီး သွားရောက်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးသိန်းဦး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဗီယက်နမ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဗဟိုကော်မတီ၏ကိုယ်စား ဗီယက်နမ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင်၊ ဗဟိုကော်မတီ၏ ပြည်ပဆက်ဆံရေးဌာန၊ ဥက္ကဋ္ဌ HE.Mr.Hong Binh Quan ၏ ဖိတ် ကြားမှုအရ ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံတော်သို့ ဇူလိုင် ၁ရက်နေ့မှ ၅ ရက်အထိ အလည်အပတ်ခရီးသွားရောက်ခဲ့သည်။
ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ဦးသိန်းဦးနှင့်အဖွဲ့သည် ဗီယက်နမ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်၊ ဗဟိုကော်မတီ၏ ပြည်ပဆက်ဆံရေးဥက္ကဌ HE.Mr. Hong Bing Quan ၊ H.E. Mdm,Tong Thi Phong, Deputy Chairwoman, National Assembly၊ Deputy Minister for Agriculture and Rural Development၊ President of the Viet Nam- Myanmar Friendship Association၊ Deputy Minister of Transport၊ Leader of Ninh Binh Party Provincial Committee, Deputy Chairman,Member of the CPV Central Committee,Central Commission for Economic Affair တို့အားတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
တွေ့ဆုံစဉ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ဗီယက်နမ်ကွန်မြူနှစ်ပါတီကြား ရင်းနှီးချစ်ခင်စွာဖြင့် ဆက်လက် လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပါတီဆက်ဆံရေးမှ နှစ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်များက ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးသိန်းဦးနှင့်အတူ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်၊ ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုစီးပွားရေး ကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းတင်၊ အမျိုသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးအဖွဲ့ဝင် မခင်ချောစုသာ(ခ) စနိုးနှင့် မမေမျိုးသွင် တို့လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။
အဖှဲ့ခြုပျဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့ဝငျ ဦးသိနျးဦး ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ ဗီယကျနမျ ဆိုရှယျလဈ သမ်မတနိုငျငံတျောသို့ အလညျအပတျခရီးသှားရောကျ
အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့ဝငျ ဦးသိနျးဦး ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ဗီယကျနမျကှနျမွူနဈပါတီ၊ ဗဟိုကျောမတီ၏ကိုယျစား ဗီယကျနမျ ကှနျမွူနဈပါတီ ဗဟိုကျောမတီဝငျ၊ ဗဟိုကျောမတီ၏ ပွညျပဆကျဆံရေးဌာန၊ ဥက်ကဋ်ဌ HE.Mr.Hong Binh Quan ၏ ဖိတျ ကွားမှုအရ ဗီယကျနမျဆိုရှယျလဈ သမ်မတနိုငျငံတျောသို့ ဇူလိုငျ ၁ရကျနမှေ့ ၅ ရကျအထိ အလညျအပတျခရီးသှားရောကျခဲ့သညျ။ ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျ ဦးသိနျးဦး နှငျ့အဖှဲ့သညျ ဗီယကျနမျကှနျမွူနဈပါတီ၊ ဗဟိုကျောမတီအဖှဲ့ဝငျ၊ ဗဟိုကျောမတီ၏ ပွညျပဆကျဆံရေးဥက်ကဌ HE.Mr. Hong Bing Quan ၊ H.E. Mdm,Tong Thi Phong, Deputy Chairwoman, National Assembly၊ Deputy Minister for Agriculture and Rural Development၊ President of the Viet Nam- Myanmar Friendship Association၊ Deputy Minister of Transport၊ Leader of Ninh Binh Party Provincial Committee, Deputy Chairman,Member of the CPV Central Committee,Central Commission for Economic Affair တို့အားတှဆေုံ့ခဲ့သညျ။
တှဆေုံ့စဉျတှငျ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျနှငျ့ ဗီယကျနမျကှနျမွူနှဈပါတီကွား ရငျးနှီးခဈြခငျစှာဖွငျ့ ဆကျလကျ လကျတှဲဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး၊ ပါတီဆကျဆံရေးမှ နှဈနိုငျငံ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး အတှကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး နှဈဖကျခေါငျးဆောငျမြားက ရငျးရငျးနှီးနှီး ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့ဝငျ ဦးသိနျးဦးနှငျ့အတူ ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့ဝငျ၊ ကရငျပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ ဒျေါနနျးခငျထှေးမွငျ့၊ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ ဗဟိုစီးပှားရေး ကျောမတီ၏ အတှငျးရေးမှူး ဦးဝငျးတငျ၊ အမြိုသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျရုံးအဖှဲ့ဝငျ မခငျခြောစုသာ(ခ) စနိုးနှငျ့ မမမြေိုးသှငျ တို့လိုကျပါသှားခဲ့သညျ။